Miley Cyrus တဈယောကျ ကိုယျဝနျရှိနပွေီလား ? ? ? – SoShwe
Home/Entertainment/Miley Cyrus တဈယောကျ ကိုယျဝနျရှိနပွေီလား ? ? ?
Miley Cyrus တဈယောကျ ကိုယျဝနျရှိနပွေီလား ? ? ?
So Shwe March 3, 2020	Entertainment Leaveacomment
နာမညျကြျောအဆိုတျောတဈဦးဖွဈသူ Miley Cyrus တဈယောကျ ရငျသှေးလှယျထားရသညျဆိုသညျ့ သတငျးမြားအပျေါ ခဈြသူဖွဈသူ Cody Simpson ကငွငျးဆနျပယျခလြိုကျပါတယျ။ Cody ရဲ့ မှေးရပျမွေ သွစတွေးလနြိုငျငံ၌ ပွုလုပျသညျ့ Today Show အစီအစဉျ၌ အသကျ (၂၃) နှဈအရှယျ Cody က အမရေိကနျနိုငျငံ၊ လော့ဈအိနျဂယျြလိဈမွို့မှတဈဆငျ့ ဧညျ့သညျအဖွဈ ပါဝငျတငျဆကျပေးခဲ့ပွီး Miley ရဲ့ ကိုယျဝနျသတငျးအပျေါ အရှနျးဖောကျရငျး ငွငျးဆနျသှားခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါ Show ရဲ့ အစီအစဉျတငျဆကျသူ Karl Stefanovic ရဲ့ မေးခှနျးအပျေါ Cody က “အိုး .. ဟုတျပါတယျဗြာ။ ကြှနျတျော ကိုယျဝနျရှိနတော နှဈပေါငျးမြားစှာကွာပါပွီ။” ဟု အရှနျးဖောကျ ဖွကွေားသှားခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဆကျလကျ၍လညျး Cody က “ကြှနျတျောကတော့ ကိုယျ့အလုပျနဲ့ ကိုယျ့အတှကျ အရေးကွီးတဲ့အရာတှအေပျေါမှာပဲ အာရုံစိုကျထားပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အတှကျက အလုပျနဲ့ ဂီတကိစ်စတှပေဲရှိပါတယျ။” ဟု ဖွကွေားသှားခဲ့ကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
ယခုကဲ့သို့ Miley ကိုယျဝနျဆောငျနရေပွီဆိုသညျ့ သတငျးသညျလညျး Cody ရဲ့ပွောစကားမြားကွောငျ့ ထှကျပျေါလာခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး Sunday Telegraph သတငျးဌာနနဲ့တှဆေုံ့ရာ၌ Cody က “ကြှနျတျော သွစတွေးလကြို သခြောပေါကျပွနျခငျြပါတယျ။ အဲ့ဒီနိုငျငံကို ကြှနျတျောအရမျးလှမျးနပွေီး ပွနျလာခငျြနပေါပွီ။ LA မှာလညျး ကြှနျတေျာ့အိမျရှိပမေယျ့ သွစတွေးလကြတော့ ကြှနျတေျာ့အတှကျ နံပါတျ (၁) ဦးစားပေးပါပဲ။ LA က ကြှနျတေျာ့အလုပျနဲ့ ပတျသကျပွီး အမြားကွီး အဓိပ်ပာယျရှိပမေယျ့ ကြှနျတေျာ့စိတျက အမွဲတမျး သွဇီကိုပဲရောကျနတောပါ။ ကြှနျတေျာ့မိသားစုအရအေတှကျကိုလညျး ကြှနျတျောတိုးပှားအောငျ လုပျခငျြပါတယျ။” ဟုဖွကွေားခဲ့ခွငျးကွောငျ့ဖွဈကွောငျးသိရှိရပါတယျ။
Miley Cyrus တစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား ? ? ?
နာမည်ကျော်အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သူ Miley Cyrus တစ်ယောက် ရင်သွေးလွယ်ထားရသည်ဆိုသည့် သတင်းများအပေါ် ချစ်သူဖြစ်သူ Cody Simpson ကငြင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ Cody ရဲ့ မွေးရပ်မြေ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၌ ပြုလုပ်သည့် Today Show အစီအစဉ်၌ အသက် (၂၃) နှစ်အရွယ် Cody က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့မှတစ်ဆင့် ဧည့်သည်အဖြစ် ပါဝင်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး Miley ရဲ့ ကိုယ်ဝန်သတင်းအပေါ် အရွှန်းဖောက်ရင်း ငြင်းဆန်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Show ရဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Karl Stefanovic ရဲ့ မေးခွန်းအပေါ် Cody က “အိုး .. ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါပြီ။” ဟု အရွှန်းဖောက် ဖြေကြားသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်၍လည်း Cody က “ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်က အလုပ်နဲ့ ဂီတကိစ္စတွေပဲရှိပါတယ်။” ဟု ဖြေကြားသွားခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
ယခုကဲ့သို့ Miley ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရပြီဆိုသည့် သတင်းသည်လည်း Cody ရဲ့ပြောစကားများကြောင့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Sunday Telegraph သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံရာ၌ Cody က “ကျွန်တော် သြစတြေးလျကို သေချာပေါက်ပြန်ချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနိုင်ငံကို ကျွန်တော်အရမ်းလွမ်းနေပြီး ပြန်လာချင်နေပါပြီ။ LA မှာလည်း ကျွန်တော့်အိမ်ရှိပေမယ့် သြစတြေးလျကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် နံပါတ် (၁) ဦးစားပေးပါပဲ။ LA က ကျွန်တော့်အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်က အမြဲတမ်း သြဇီကိုပဲရောက်နေတာပါ။ ကျွန်တော့်မိသားစုအရေအတွက်ကိုလည်း ကျွန်တော်တိုးပွားအောင် လုပ်ချင်ပါတယ်။” ဟုဖြေကြားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
Previous ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ဝနျထမျးမြားကို အိမျမှတဈဆငျ့ အလုပျလုပျခှငျ့ပေးလိုကျသညျ့ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။
Next ဘောလုံးလောကနဲ့ မပတျသကျရနျ ပွဈဒဏျခမြှတျခံလိုကျရသညျ့ လီဗာပူးနဲ့ခြဲလျဆီးကစားသမားဟောငျး။